ASAPbio - AfricArXiv
Ku dhawaaqida #FeedbackASAP by ASAPbio
ASAPbio waxay lashaqeyneysaa DORA, HHMI, iyo Chan Zuckerberg Initiative si ay uqabsato dood ku saabsan abuuritaanka dhaqan dib u eegis dadweyne oo wax ku ool ah iyo jawaab celin ku saabsan horudhac. Akhriso ogeysiiska ASAPbio oo dhan oo raadi sida loo diiwaan geliyo dhacdada loona taageero dib-u-eegista hore.
By Johanssen Obanda, 4 bilood 4 bilood horaantii
FORCE2019: Samaynta aragti wadaag ah oo loogu talagalay diyaarinta
Blog-ga waxaa lagusoo dhejiyay ASAPbio waxaana dib loogu isticmaalaa shatiga CC-BY 4.0. Fadlan ku dar wax faallooyin iyo faallooyin ah boostada asalka ah asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner. Ka dib wada hadal guddi ku saabsan “yaa saameyn ku yeelan doona guusha hore ee u diyaargarowga cilmiga bayoolaji iyo maxeyse ku dambeyn doontaa?” Ee FORCE2019 (halkan lagu soo koobay), waxaan sii wadnay wada hadalka. Akhri wax dheeraad ah…
By Jo Havemann, 2 sano 7 bilood horaantii